Home Somali News Somaliland: Isbahaysiga Mucaaradka Somaliland Oo Quus Ka Taagan Dhaqan-galka Heshiiskii Doorashada Laga...
Isbahaysiga Mucaaradka Somaliland, ayaa shir jaraa’id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay ku sheegeen inay u muuqato in madaxweynuhu ka baxay heshiiskii asxaabtu ku gaadhay in December badhtankeeda sanadka 2016-ka dalka laga qabto doorashada Madaxtooyada iyo ta wakiilada.
Heshiiskaasi waxaa daraf ka ahaa xukumadda oo uu u saxeexay Madaxweyne xigeenka Somaliland,balse waxaa heshiiskaasi gaashaanka ku dhuftay Guurtida.
[quote]Hogaamiyaha Ucid, Eng Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay inay ahayd in Madaxweyne Siilaanyo digreeto ku soo saaro dhaqan galinta heshiiskii laga gaadhay Muddo kordhinta xukumadda “Waxay ahayd in Madaxweynuhu waajibkiisa iyo xilkiisa gutto, oo uu digreeto ku soo saaro wakhtiga doorashada. Waxaa igu maqaale ah inaanu madaxweynuhu ilaa maanta wax digreeto ah ku soo saarin arrintii. Haddaanu nahay Asxaabta mucaaradka ah iyo Madashii Waxaanu shacabka Somaliland u sheegaynaa in heshiiskii laga gaadhay wakhtiga doorashada ee aduunka oo dhammi qaatay ee qasriga Madaxweynaha lagu saxeexay arrintii laga baxay, wixii dalkeena ka dhacana uu masuuliyaddeeda qaadi doono Madaxweynaha Somaliland” ayuu yidhi Eng Faysal.[/quote]